‘लकडाउन’ मा महिला हिंसा घटेको कि लुकेको ? – Nepal Japan
‘लकडाउन’ मा महिला हिंसा घटेको कि लुकेको ?
नेपाल जापान ९ बैशाख १२:२२
कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेका बेला परिवारका सबै सदस्य घरभित्रै भए पनि नेपाल प्रहरीले महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको दावी गरेको छ । तर महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरतले भने घटना बढे पनि बाहिर आउन नसकेको बताएका छन् ।
प्रहरीले दर्ता भएका महिला हिंसाका घटनाका आधारमा ‘लकडाउन’ यता महिला हिंसाका घटना घटेको बताएको हो । उजुरी नपर्नुमा भने लकडाउन नै कारण रहेको अधिकारकर्मीहरुको दावी छ ।